Xog..Somaliland Oo Coldoon U Dhiibeysa Dal Kale | Xaqiiqonews
Xog..Somaliland Oo Coldoon U Dhiibeysa Dal Kale
Labo maalin ka hor Somaliland ayaa xabsiga u taxaawday samefale Cabdi Maalik Muuse Coldoon, ka dib markii boggiisa Faysbuugga uu ku daabacay qoraalo ka dhan baadariyadda diinta karishtaanka ah faafisa ee Joy Ciise.
Intiina la socda sheekada Cabdi Maalik Coldoon iyo Somaliland, waxaad ogtihiin in dhowr mar Cabdi Maalik lagu xiray deegaanada Somaliland iyadoo markii ugu dambeysay ay maxkamad ku xukuntay xabsi 3 sano ah, hase ahaate 1 sano iyo bar oo uu xabsiga ku jiray ka dib waa la sii daayey.
19-Ka bishan markale Somaliland ayaa xabsi dhigtay Coldoon, ka dib qoraalo uu ka baahiyey xarumo iyo jaamacado lagu faafiyo falal ka dhan ah diinta islaamka -sida Cabdi Maalik ku dooday.
Coldoon ayaa dhowr mar ka dalbaday maamulka Somaliland baaritaano lagu sameeyo xarumo iyo goobo waxbarasho oo uu ku eedeeyey in ay faafinayaan diinta kirishtaanka iyo falalka ka dhan ah dhaqanka suuban ee islaamka.
Somaliland ayaa eedeynta Coldoon ugu jawaabtay xarig iyo xabsi isla socda, arintaasi oo tuhun horleh abuurtay waxaan baraha bulshada ka bilwoday kacdoon.
Warar hoose oo Xaqiiqonews aysan xaqiijin karin ayaa sheegaya in uu socda qorsho Cabdi Maalik Coldoon loogu gudbinaayo dal kale, madaama dhowr mar ay fashilnatay isku day lagu doonaayey in xabsi dheer uu ku qaato gudaha Somaliland, sababo la xariiro qaab dhismeedka maamulka Somaliland ee qabiilka ku dhisan- waxaana qorshahaasi dabada ka riixaya rag ajaanib ah oo ka tirsan maamulka dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo.